Madaxda Afrika oo taageeray in dib loo celiyo qaxootiga Soomaaliya - Sabahionline.com
Madaxda Afrika oo taageeray in dib loo celiyo qaxootiga Soomaaliya
Madaxda Afrika ee ku kulmay shir-madaxeedka Urur-goboleedka Horumarinta (IGAD) ee Addis Ababa ayaa isku raacay dib-u-celinta qaxootiga Soomaalida ah ee Kenya iyo Itoobiya, sidaana waxa Axaddii (26-kii Maajo) sheegay Garowe Online-ta Soomaaliya.
Maxkamadda Sare ee Kenya oo diidday qorshaha dib-u-celinta qaxootiga
Dib-u-cleinta kadisada ah ee qaxootiga Soomaalida oo laga yaabo in ay xoojiso askar qorashada al-Shabaab
Hoggaamiyayaasha ayaa Jimcihii isku raacay "qorshaha ay wadaan xukuumada Kenya iyo Soomaaliya iyo UNHCR-ta (Komishanka Sare ee Qaxootiga Qaramada Midoobay) kaas oo ay ku doonayaan in sannadkan dhammaadkiisa la qabto shir caalami ah oo ku saabsan dib-u-celinta qaxootiga Soomaalida".
Sida lagu sheegay hadal ka soo baxay Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, Kenya iyo Somaaliy ayaa si wadajir ah u guddomin doona shirka, iyaga oo ku casuumi doona saamileeyda arrimaha Soomaaliya in ay isla meel-dhigaan sida ugu habboon ee iyaga oo bed qaba dib loogu celin karo qaxootiga.
Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa soo dhaweeyay qorshaha.
Malaayiin qaxooti Soomaali ah ayaa xilligan ku nool Itoobiya iyo Kenya, iyada oo kaliya ku dhawaad nus malyuun ay ku noolyihiin xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
May 27, 2013 @ 04:43:49PM
Waa talaabo wacan. Waa in qaxoontiga si tartiib-tartiib ah dibu dajin loogu sameeyaa, waana in sidoo kale xirfado la baraa oo lagu booriyaa inay dhaqanka qaataan si ay u badbaadaan. Ilaahay ha caawiyo Soomaalida guud ahaan si ay nabad u helaan.